Dawladda Somalia oo Awaamiir ka soo saartay Ganacsatadda taageera Alshabaab. iyadoo aan loo marayn Garsoorka Dalka. – Hornafrik Media Network
Kulan ay Caawa Muqdisho ku yeesheen Hay’adda amaanka waxay ka sheegeen in ay ogaadeen in lacagaha ay ganacsatada siiyaan Al-Shabaab ay dhib weyn ugu geystaan Shacabka Soomaaliyeed. Waxayna Kulankooda kadib soo saareen Hay’adaha Ammaanku Go’aanadan:-
1. In aan la aqbali doonin in Al-Shabaab la siiyo lacagaha ay ugu yeeraan Taakuleynta Mujaahidiinta iyo Sakawaad.
2. Cid walbo oo Al-Shabaab lacag siisa Talaabo aya laga qaadaya mana la aqbalayo in marmarsiyo laga dhigto Xoog ayeey iiga qaateen ama wa la i handaday.
3. Ganacsatada waxa looga digay in Al-Shabaab aysan siin Taageero nooc kasta oo ay ahaato.
4. Cidii Al-Shabaab Maamul jira u aqoonsata Talaabo ayaa laga qaadaya.
5. Xawaaladaha dalka ka howlgala Al-Shabaab lacag ma u keydin karaan lacagna ma u diri karaan.
5. Shirkadaha Isgaarsiinta Al-Shabaab uma fududeyn karaan Adeegyada kala duwan ee Isgaarsiinta.
6. Caawa laga bilaabo Ninkii ganacsade ah oo aado degaanada Al-Shabaab ay maamulaan sida Tooro toorow ee lacag u geeya Al-Shabaab waxaa uu mutaysanayaa Xabsi, Hantidiisana Dawladda ayaa la wareegaysa.
7. Cid walbo oo go’aanadaan ka hortimaado talaabo ayaa laga qaadaya.
Waa Markii ugu horaysay ee Go’aano noocan ah ay soo saarto Dawladda Somalia, Waxayna Go’aanadan oo ah Kuwo culus ay u baahnaayeen in loo maro Siffo Sharci ah, sida in Dawladdu ay xoogga saarto Ansixinta Sharciga La Dagaalanka Argagixisadda.
Go’aanadan laguma cadayn in loo marayo Ciqaabaha ka dhalanaya Garsoorka Dalka, Waxayna taasi mugdi sii galinaysaa Xaaladdii Cakirnayd ee Dalka, iyadoona Dadka ay u baahan yihiin Tallaabooyinka la qaadayo inay noqdaan kuwa cad oo ku salaysan Garsoor Cadaaladeed, balse in Go’aan Ciqaabaha ka dhalan kara ay ka mid tahay Xabsi, La Wareegid Hanti IWM ay Hay’ado Amni iskood isaga gaareen waxaa ka dhalan karta ku tagri fal Awoodeed.